'ISITHSABA' SEXESHA LESITHANDATHU LIJIKELEZE IXESHA LESIQINGATHA SEXESHA KODWA NGOKWEENKCUKACHA - UBONISO
Uyakhumbula ukuba iintliziyo zethu zaphazamiseka njani xa iNetflix yabhengeza ukuphela 'kwesithsaba'? Ngenxalenye yesihlanu
Uyakhumbula ukuba iintliziyo zethu zaphazamiseka njani xa iNetflix yabhengeza ukuphela 'kwesithsaba'? Ngofakelo lwesihlanu kunye nolwandiso, umboniso uphele ngesiquphe.
Ewe, kuvela ukuba iNetflix igqibe kwelokulipholisa inxeba, kwaye ayisiqhuli.
Umboniso osekwe kubomi nakwimpumelelo kaKumkanikazi uElizabeth II uphume waba ngumdlalo omkhulu ngenxa yemiboniso bhanyabhanya. Kwaye abantu banomdla ongapheliyo kunye nomdla malunga nenkqubo yobukumkani baseBritane.
masamune kun ixesha lesi-2
Ixesha lesithsaba 6: Ngaba Kuyenzeka? Yaqinisekiswa Nini?
UPeter Morgan utshintshe ingqondo ekupheliseni isithsaba emva kwamaxesha nje amahlanu. Oku kuthetha ukuba uthotho lweNetflix luya kubetha izikrini ixesha lesithandathu .
UMdali uMorgan wathi xa beqala ukuphikisana ngesiqwenga sexesha lesi-5.
Kwacaca ukuba yikristale ecacileyo ukuba bafuna ukwenza umdlalo olungileyo ukuya kubutyebi kunye nokuntsokotha kwebali. Ukufezekisa oko, kufuneka babuyele kwisicwangciso sokuqala kwaye baye kumaxesha amathandathu.
Ukucima nakuphi na ukudideka, uthotho lwesithandathu aluyi kubasondeza abaphulaphuli kule mihla. Endaweni yoko, iya kusenza sikwazi ukugubungela ixesha elifanayo ngeenkcukacha ezibaluleke ngakumbi.
Utshintsho lwengqondo lwenzekile kwiinyanga nje ezintandathu emva koko Ukuqinisekiswa kweNetflix ela xesha lesi-5 liya kuba sisiphelo.
Kuthetha ukuba u-Imelda Staunton (uKumkanikazi omtsha uElizabeth II), uza kulandela abachasi bakhe ekufotweni amaxesha amabini. Ngokunjalo noLesley Manville, obhengezwe njengeNkosazana uMargaret kwiveki ephelileyo.
Ixesha lesithsaba 6: Ngoobani Bonke abaza kuba ziiNkqantosi?
INetflix ibhengeziwe ukubuya komboniso wexesha elitsha ngokupheleleyo. Kutshanje banike umnqweno omkhulu wabalandeli babo. Umboniso wabuya wabuyela ngo-2016 kwaye waba yinto yangoko nangoko.
Ukugxila kubomi bukaKumkanikazi uElizabeth kunye nabalinganiswa abaphakathi. Umboniso usenza ukuba sive uxinzelelo lwezopolitiko kunye nomthwalo omkhulu woxanduva njengendlovukazi. Endaweni yobunewunewu bookumkani nookumkanikazi, kumdlalo, sibona ukuphazamiseka kwezopolitiko abadlula kuzo.
Ixesha lesithsaba 6: Iya kuba yintoni iyelenqe lothotho?
Nangona kunjalo, akukho trailer erhuqwayo kwixesha elizayo okwangoku. INetflix iqinisekisa ukuvuselelwa kothotho lwexesha lesithandathu.
Kodwa kuyakufuneka silinde ixesha elide ukuze ekugqibeleni siyibone nanjengokuba isizini yesine ingekakhululwa. Siyathemba ukuba amaxesha onyaka wesine aqala ngokukhawuleza…
INetflix yajoyina umbhali uPeter Morgan, kunye nabavelisi abaziintloko bebhanki imifanekiso yasekhohlo kunye nemifanekiso kamabonwakude yakwaSony kwasekuqaleni komboniso.
Ngaba kuya kubakho ixesha 3 le-salem
Abalinganiswa ababalulekileyo uClaire Foy no-Olivia Colman njengo-Queen Elizabeth II, u-Matt Smith kunye no-Tobias Menzies abadlala indawo yeNkosana uPhilip (i-Duke yase-Edinburgh) kunye no-Vanessa Kirby no-Helena Bonham Carter abadlala indawo ye-Princess Margaret (Countess of Snowdon) nabo batyikitya kumaxesha amabini inye.
Ixesha lesine liza kuba liwotshi eyonwabisayo enezinto eziphambili ezifana nokuvela kweNkosazana uDiana, iNkosana uHarry kunye neNkosana uWilliam, eza kwenza abalandeli babenemincili kwaye bonwabe.
gin tama indoda enye yenqindi
Umntu wosapho lois 9/11
I-sherlock holmes yexesha 5 umhla wokukhutshwa
phezulu 5 Xbox 360 imidlalo
i-cast of insecure hbo